ဘတ်စ်ကား၊ နည်းပြ၊ ကျောင်းဘတ်စ်ကားနှင့်ပီသသောဘတ်စ်ကားစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်လေအေးပေးစက် | တေးရေး
ဘတ်စ်ကား၊ နည်းပြ၊ ကျောင်းကားနှင့်ရှင်းလင်းသောဘတ်စ်ကားများအတွက်လေအေးပေးစက်
SZR စီးရီး၊ အလယ်အလတ်အဆင့်မြင့်ဘတ်စ်ကား၊ ၈.၅-၁၂.၉ မီတာဘတ်စ်ကားအတွက်၊ ကြေးနီ Tube လူမီနီယမ်အဖလိုင်စင်။
SZR စီးရီးသည်အလယ်အလတ်အဆင့်မြင့်သမားရိုးကျဘတ်စ်ကားများ၊ နည်းပြများ၊ ကျောင်းကားများသို့မဟုတ်ပီသသောဘတ်စ်ကားများမှ ၈.၅ မီတာမှ ၁၂.၉ မီတာအကွာအဝေးခြားသောခေါင်မိုးလေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားသည့်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ စီးရီးဘတ်စ်ကားလေအေးစက်၏အအေးခံနိုင်မှုသည် 20kW မှ 40kW မှ (62840 မှ 136480 Btu / h သို့မဟုတ် 17200 မှ 34400 Kcal / h) အထိရှိသည်။ မီနီဘတ်စ်သို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကား ၈.၅ မီတာအောက်လေအေးပေးစက်နှင့် ပတ်သက်၍ SZG စီးရီးကိုဖတ်ပါ။ သို့မဟုတ်သင်ပိုမိုသိရှိလိုပါက sales@shsongz.cn တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
Bus A / C SZR စီးရီးများ၏နည်းပညာအသေးစိတ်
75064 Btu / ဇ
81888 Btu / ဇ
၂၈ kW or
95536 Btu / ဇ
30 kW သို့မဟုတ်
102360 Btu / ဇ
88712 Btu / ဇ
33 kW သို့မဟုတ်
112596 Btu / ဇ
8.0 ~ 8.4 မီတာ
8.5 ~ 8.9 မီတာ
9.5 ~ 9.9 မီတာ
10.0 ~ 10.4 မီတာ
475 cc / r ကို
558 cc / r ကို
650 cc / r ကို
အလေးချိန် (clutch ဖြင့်)
၆၀၀၀ m3 / h (၃)
၃၆၀၀ m3 / h (၄)
31 kW သို့မဟုတ်
105772 Btu / ဇ
126244 Btu / ဇ
34 kW သို့မဟုတ်
116008 Btu / ဇ
122832 Btu / ဇ
136480 Btu / ဇ
10.5 ~ 10.9 မီတာ
11.0 ~ 11.4 မီတာ
12,0 ~ 12,9 မီတာ
750 cc / r ကို
၇၂၀၀ m3 / h (၈)
SZR-IIF-D နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် SZR-III-D နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် SZR-IV-D နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
SZR-IVF-D နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် SZR-VD နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ SZR-VF-D နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ
SZR-VI-D နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ SZR-VIF-D နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
၁။ စနစ်တစ်ခုလုံးတွင်အမိုးယူနစ်၊ လေကြောင်းပြန်အပေါက်၊ ကွန်ပရက်နှင့်တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတွင်ဖိအား bracket၊ ခါးပတ်၊ ရေခဲသေတ္တာတို့မပါ ၀ င်ပါ။
2. ရေခဲသေတ္တာ R134a ဖြစ်ပါတယ်။
3. အပူ function ကိုနှင့် alternator optional ကိုဖြစ်ကြသည်။
4. Compressor BOCK, Valeo or AOKE သည်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
၅။ ပန်ကာသို့မဟုတ်မှုတ်တံကို brush သို့မဟုတ် brushless ကဲ့သို့သောရွေးချယ်မှုအနေနှင့်။
SZR စီးရီး R&D နောက်ခံ -
SZR စီးရီးလေအေးပေးစက်များသည်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ဘတ်စ်ကားလေအေးစက်များ၏အသွင်အပြင်လိုအပ်ချက်ကိုပြည့်မီစေရန်ထုတ်လုပ်သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင်အရည်အသွေးရရှိရန် SZR စီးရီးလေအေးပေးစက်များသည်ပုံသွင်းထားသော SMC အဖုံးနှင့်လူမီနီယမ်သတ္တုစပ်များကိုအသုံးပြုသည်။
1. AC အဖုံး: tသူအဖုံး SMC နှင့်လူမီနီယံသတ္တုစပ်၏နည်းလမ်းကိုလက်ခံသည်။
သမားရိုးကျလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော FRP ထိပ်ပိုင်းအဖုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အသွင်အပြင်အရည်အသွေးသည်အလွန်တိုးတက်လာခဲ့ပြီး၊ ပျမ်းမျှနေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှုသည်များစွာတိုးတက်လာသည်။ ၎င်းသည်အလတ်စားနှင့်အဆင့်မြင့်ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ခရီးသွားဘတ်စ်ကားများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
SMC နှင့် fiber ဖန်အဖုံးအကြားခြားနားချက်ကိုပိုမိုသိရှိရန်အတွက် SUPPRT-FAQ ကိုလှည့်ပါ။
၂ ။ ထူးအိမ်သင် နှင့် ပုံသဏ္streamာန်ချောမွေ့
SZR စီးရီးဘတ်စ်ကား AC ၏အသွင်အပြင်သည်လှပပြီးအသွင်အပြင်နှင့်ပါးလွှာသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူချောမွေ့သည်။ လေအေးပေးစက်အထူမှာ ၁၈၈ မီလီမီတာဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လက်ရှိသမားရိုးကျလေအေးပေးစက်များ၏အထူထက်နည်းသည်။
၃။ AC ဖွဲ့စည်းပုံ - ပေါ့ပါးသောဖွဲ့စည်းပုံ
condenser base သည် inverted V-shaped frame ကိုအောက်ခြေ shell ပုံစံမပါဘဲ၊ ဘေးဘက်ရောင်ခြည်သည်ပေါ့ပါးပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ evaporator assembly air duct သည်ဆန်းသစ်သောအောက်ခြေ shell နှင့်ပေါင်းစပ်ကွေးသောဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုသည်။ အထက်ပါနည်းလမ်းများမှတဆင့်လေအေးပေးစက်၏အလေးချိန်သည်အလွန်ကျဆင်းသွားသည်။
inverted V-shaped Frame က
ပေါ့ပါးသောဘေးထွက် Beam ဖွဲ့စည်းပုံ
4. AC ဖွဲ့စည်းပုံ: ဝန်ဆောင်မှု & Maintenance Friendly
SZR စီးရီးလေအေးပေးစက်၏အပေါ်ဆုံးအဖုံးသည်ပတ္တာချိတ်ဆက်မှုတည်ဆောက်ပုံကိုတပ်ဆင်ထားပြီးယာဉ်ကိုတင်သည့်အခါအဖုံးပြားကိုဖယ်ရှားရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်ချိန်ကိုများစွာသက်သာစေသည်။ condensing fan ကိုအထက်မှတပ်ဆင်ထားပြီး၊ condensing fan ကိုအစားထိုးသောအခါအဖုံးကိုဖွင့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကာလအတွင်းအငွေ့ပျံစေသောပန်ကာကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဘေးဘက်အဖုံး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည်ရောင်းချပြီးနောက်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လွယ်ကူသည်။
၅ ။ မြင့်မားသော - ထိရောက်မှု condenser
SZR စီးရီးဘတ်စ်ကားလေအေးပေးစက်များသည် CFD တုပမှုနှင့်ပေါင်းစပ်။ အမှန်တကယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုရလဒ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဘတ်စ်ကားလေအေးစက်ကွန်ဒိုများ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်၊ စီးဆင်းမှုအစီအစဉ်၏စီးဆင်းမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်မြင့်မားသောအောင်မြင်မှုအတွက်မညီမျှသောစီးဆင်းမှု၏အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းကိုချမှတ်သည်။ အပူလဲလှယ်အပူလဲလှယ်၏ထိရောက်မှု။
အပူလဲလှယ်၏လေတိုက်နှုန်း CFD ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
၆ ။ ထူးခြားသောလေတိုက်လမ်းညွှန်ဒီဇိုင်း
SZR စီးရီးဘတ်စ်ကားလေအေးပေးစက် condenser ကို condenser ပန်ကာလေကြောင်းလမ်းညွှန်ပါးပျဉ်းနှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ လေကြောင်းလမ်းညွှန်မျက်နှာဖုံးမှာလေထုစီးဆင်းမှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့်လေကြောင်းလမ်းညွှန်မရှိဘဲသမားရိုးကျအပူကိုဖယ်ရှားရန်အတွက် Archimedes spiral နိယာမနှင့် circular cone design ကိုအသုံးပြုသည်။ လေကြောင်းလိုင်း၏ပြreturnနာသည်လေအေးပေးစက်၏အပူဖလှယ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုများစွာတိုးတက်စေသည်။
ထူးခြားသော condensing ပန်ကာပါးပျဉ်း
Simulator ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းများမှတဆင့်လေ deflector ကိုတပ်ဆင်သောအခါလေစီးကြောင်းအဖွဲ့အစည်းသည်ပိုမိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်။ shroud မရှိရင် ထွက်သွားသောလေထုစီးဆင်းမှုသည်ပျံ့နှံ့သွားပြီးနောက်ပြန်စီးသောဖြစ်စဉ်သည် ပို၍ ထင်ရှားသည်။
လေချေးခြင်းမရှိဘဲလေ ၀ င်လေထွက်စီးဆင်းမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်လေ ၀ င်လေထွက်ပေါက်နှင့်လေ ၀ င်လေထွက်စီးဆင်းမှု
၇။ AC စွမ်းဆောင်ရည် - ရေခဲသေတ္တာအားသွင်းသည့်ပမာဏနည်းသည်
ရိုးရာဘတ်စ်ကားလေအေးစက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက SZR စီးရီးများသည်ကောင်းမွန်သောအပူလဲလှယ်ဒီဇိုင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းပိုက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ရေခဲသေတ္တာတာဝန်ခံကို 30% လျှော့ချပါ။ ဤသို့ဖြင့်ရေခဲသေတ္တာယိုစိမ့်မှုသည်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
SZQ စီးရီးဘတ်စ်ကား AC လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း tion optional）
၁။ ယာဉ်မောင်း၏အခန်းတွင် Defroster နှင့် Air Conditioner
ယာဉ်မောင်းသူနှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိသောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပေးရန်ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ defroster နှင့် AC ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
၂ ။ ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာ
Control panel နှင့်ယာဉ်တန်ဆာပလာများ၏ပေါင်းစည်းမှုသည်ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု၏ layout ပုံစံအတွက်အဆင်ပြေသည်။ ကုန်ပစ္စည်းထိန်းချုပ်မှု၏ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှု function ကိုဖောက်သည်စစ်ဆင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ထည့်သွင်းထားသည်။
၃ ။ ပိုက်နှင့်အပူနည်းပညာ
၄ ။ လေသန့်စင်ခြင်းနည်းပညာ
၎င်းတွင်အဓိကအားဖြင့်လုပ်ဆောင်ချက် ၄ ခုပါ ၀ င်သည်။ electrostatic ဖုန်မှုန့်များစုဆောင်းခြင်း၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အလင်း၊ အားကောင်းသော ion generator နှင့် photocatalyst filtration ။ ၎င်းသည်အချိန်ပြည့်၊ အနှောင့်အယှက်မရှိဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နှင်းခြင်း၊ အနံ့ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ထိရောက်သောဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်း၊
၅ ။ အဝေးထိန်းရောဂါနည်းပညာနည်းပညာ
"Cloud Control" လုပ်ဆောင်ချက်သည်အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်ရောဂါရှာဖွေခြင်းကိုသိရှိနားလည်ပြီးကြီးမားသောဒေတာလျှောက်လွှာများမှတဆင့်ထုတ်ကုန် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းစွမ်းရည်များကိုတိုးတက်စေသည်။
၆ ။ စွမ်းအင်စည်းမျဉ်းဥပဒေနည်းပညာ
ဘတ်စ်ကားနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအပူချိန်အရပန်ကာနှင့်တွန်းစက်တို့၏စီးဆင်းမှုကိုအဆင့်များစွာဖြင့်ချိန်ညှိသည်။ တွန်းအား၏မကြာခဏစတင်ခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ခြင်းကိုလျှော့ချရန်၊ ခရီးသည်များအားလုံး၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်စနစ်ကိုပိုမိုထိရောက်စွာလည်ပတ်စေရန် ။
SZR စီးရီးဘတ်စ်ကား AC ၏လျှောက်လွှာ
စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လူနေမှုအဆင့်အတန်းတိုးတက်လာမှုတို့ကြောင့်ဘတ်စ်ကားသည်ရိုးရှင်းသောရိုးရှင်းသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများမှသက်သောင့်သက်သာနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအဆင့်မြင့်ခရီးသည်များသည်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တိုးပွားလာခဲ့သည်။ SZR သည်အသွင်အပြင်ကိုအာရုံစိုက်ပြီး high- နှင့် mid-range ဘတ်စ်ကားများအတွက်သင့်တော်သည်။ စျေးကွက်အလားအလာကောင်းပါတယ်
SZR စီးရီး၏အောက်ဆုံး arc သည် ၆ မှ ၇၂ မီတာရှိသောအမိုးအတွက် arcs များအတွက်သင့်တော်သည်၊ ယူနစ်အကျယ်မှာ ၁၈၆၀ မီလီမီတာဖြစ်ပြီး၊ လေထွက်ပေါက်ကိုဘတ်စ်ကားနှစ်ဖက်စလုံးရှိလေပြွန်များထဲသို့တိုက်ရိုက်ထည့်သည်။ ။ ထုတ်ကုန်စီးရီးများတွင်သေးငယ်သောမှကြီးမားသောမော်ဒယ်လ် ၈ မျိုးရှိပြီးအအေးခံနိုင်မှုသည် ၂၀ မှ ၄၀ ကီလိုဝပ်ရှိပြီး ၈ ဘတ်နှင့် ၁၃ မီတာဘတ်စ်ကားများအတွက်သင့်တော်သည်။
၅ ။ စွမ်းအင်စည်းမျဉ်းဥပဒေနည်းပညာ
high-end စီစဉ်မှု - အဓိကအားဖြင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အဆင့်မြင့်ခရီးသွား, ည့်ဘတ်စ်ကားများ၊
စီးပွားရေးဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှု - အဓိကအားဖြင့်စီးပွားရေးဘတ်စ်ကားများ၊ ခရီးသွား bus ည့်ဘတ်စ်ကားများ၊
၃။ ဘတ်စ်ကားလေအေးပေးစက် SZR စီးရီးအတွက်လျှောက်လွှာများ။
SONGZ လေအေးပေးစက် Riyadh (ဆော်ဒီအာရေဗျ) တွင် Ankai (JAC) 600 ဘတ်စ်ကားတပ်ဆင်ထားသည်
Skongz လေအေးပေးစက် Riyadh (ဆော်ဒီအာရေဗျ) တွင် Ankai (JAC) ဘတ်စ်ကား ၃၀၀၀ တပ်ဆင်ထားသည်
နေပြည်တော်တွင် SONGZ လေအေးစက်ဖြင့် Foton 1000 ဘတ်စ်ကားတပ်ဆင်ထားသည်။
ရှေ့သို့ Mini နှင့် Midi City Bus သို့မဟုတ် Tourist Bus များအတွက်လေအေးပေးစက်
နောက်တစ်ခု: စီးပွားရေး၊ ဘတ်စ်ကား၊ နည်းပြ၊ ကျောင်းကားနှင့်ပီသသောဘတ်စ်ကားများအတွက်စီးပွားရေးလေအေးပေးစက်